सेक्समा भरपुर आनन्द लिने हो ? बेडरुममा राख्नुहोस यस्तो चिज - Naya Pusta
सेक्समा भरपुर आनन्द लिने हो ? बेडरुममा राख्नुहोस यस्तो चिज
Naya Pusta २०७४ कार्तिक २२ गते प्रकाशित
एजेन्सी । यदि तपाईं पनि हप्तामा दुईपटकभन्दा बढि सेक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने बेडरुममा टिभि राख्नुहोस् । यस्तो सर्वेक्षणका अनुसार जो जोडिले आफ्नो बेडरुममा टिभि राख्दछन् उनीहरुले हप्तामा कम्तीमा पनि दुई पटक सेक्सको मजा लिने गरेका हुन्छन् । ब्रिटेनमा भएको सर्वेक्षणमा भाग लिने मानिसहरुले बेडरुममा टिभि राखेका कारण नै सेक्सबाट भरपुर आनन्द लिन सकेको स्विकार गरे।
सर्वेक्षणमा भाग लिएका आधाभन्दा बढि मानिसहरुले टिभीमा आफ्नो मनपर्ने कार्यक्रम हेर्दै सेक्स गर्नुको मजा नै छुट्टै भएको बताए। यस्तै ४७ प्रतिशत मानिसहरुले एकपटक कपडा उतारिसकेपछि टिभिमा जे कार्यक्रम आएपनि त्यसको कुनै मतलब नहुने पनि बताए। त्यहिँ २६ प्रतिशत मानिसले उनीहरुलाई आफ्नो बेडरुममा टिभी राखेको मन नपर्ने बताए।
सेक्सको दौरान अरु कुनै चीजमा ध्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यले बेडरुममा टिभी नराखेको उनीहरुको भनाई छ। उक्त सर्वेक्षणमा २४३१ मानिसहरुले भाग लिएका थिए। उनीहरुलाई आफ्नो प्रेमसम्बन्ध र सेक्स लाइफको दौरान टिभिको प्रयोगको बारेमा प्रश्न गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा भाग लिएका ३७ प्रतिशत मानिसहरुले बेडरुममा टिभि राखेका कारण नै आफ्नो सेक्स लाइफ राम्रो भएको बताए। टिभीमा पार्टर सँगै इरोटिक र पोर्न फिल्म हेर्नाले पनि सेक्स लाइफ रोमाञ्चित हुने उक्त अध्ययनले बताएको छ।
२९ प्रतिशत मानिसहरुले आफ्नो पार्टनरले टिभिमा अल्छी लाग्दो कार्यक्रमहरु लगाउनाले सेक्सको दौरान उनीहरुको ध्यान अरु कुरामा जाने भएकाले सेक्स गर्दा रमाइलो नहुने बताए । १४ प्रतिशत मानिसले बेडरुममा टिभि भएका कारण उनीहरु नजिक भएको स्विकार गरे । एजेन्सी
तपाईंलाई थाहा छ एक मुखे रद्राक्षका फाइदा ? दर्शनले धन ‘लाभ’ हुन्छ
पिकनकिमा महिलाले खिचिन् छोराको फोटो, घर आएर हेरेदेखि निन्द्रा गायब
नौ वर्षीय बालक र अठार वर्षकी युवतीसँग हनिमून, विरोधमा क्याम्पियन शुरु